च्याम्पियन्स लिग : समूह चरणको खेल आजबाट, कुन कुन टोलीले खेल्दै ? «
च्याम्पियन्स लिग : समूह चरणको खेल आजबाट, कुन कुन टोलीले खेल्दै ?
प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७५, मंगलवार १२:५६
एजेन्सी । युरोपियन क्लब फुटबलको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नयाँ सिजन आजबाट (मंगलबार) बाट सुरु हुँदैछ । नयाँ सिजनको पहिलो दिन बिभिन्न समूहको समूह चरणको खेलहरु हुनेछ ।
च्याम्पियन्स लिगमा मंगलबार चार समूहको आठ खेलहरु हुँदैछ । आज समूह ‘ए’, ‘बि’, ‘सी’ र ‘डी’ का दुई दुई खेल हुनेछ । जसमा समूह ‘बि’ को खेल नेपाली समय अनुसार राति १०:४० मा सुरु हुनेछ । अन्य समूहको खेल राति १२:४५ मा सुरु हुनेछ ।
च्याम्पियन्स लिग समूह चरणको पहिलो खेलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले पिएसभीसंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । समूह ‘बि’ मा रहेको बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा पिएसभीविरुद्ध समूह चरणको पहिलो खेल खेल्नेछ ।
बार्सिलोना र पिएसभीबीचको खेल राति १०:४० मा हुनेछ । पिएसभीविरुद्ध मैदान उत्रदा बार्सिलोना जितसहित अर्को चरणमा पुग्ने लक्ष्यमा रहनेछ ।
समूह ‘बि’ अन्तर्गत कै अर्को खेलमा इटालियन क्लब इन्टर मिलान र इन्ग्लिश क्लब टोटेनहमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । राति १०:४० मा हुने खेल इन्टरको मैदानमा हुनेछ ।
यस्तै समूह ‘सी’ मा रहेका इन्ग्लिश क्लब लिभरपुलले घरेलु मैदानमा फ्रान्सको पेरीस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) संग खेल्दैछ । साबिकको उपविजेता लिभरपुल घरेलु मैदानमा बलियो टोली पिएसजीलाई स्तब्ध बनाउने लक्ष्यमा हुनेछ ।
यता, नेयमार र एमबाप्पे प्रेणित पिएसजी सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ । यसै समूहमा रहेको नेपोलीले सर्बियन क्लब रेड स्टार बेलग्रेडको सामना गर्दैछ । यो समूहको दुवै खेल राति १२:४५ मा सुरु हुनेछ ।
समूह ‘ए’ अन्तर्गत जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमण्डले क्लब ब्रुगको सामना गर्नेछ । यसै समूहको अर्को खेलमा फ्रान्सेली क्लब मोनाको र स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस समूहको दुवै खेल राति १२:४५ मा हुनेछ ।
त्यस्तै समूह डी अन्तर्गत गालातासारेले लोकमोतिभ मस्कोसंग प्रतिस्पर्धा गर्दा शाल्केले पोर्टोको सामना गर्नेछन् । दुवै खेल राति १२:४५ मा सुरु हुनेछ ।